ရသာချို: “ဘယ်ရနိုင်တော့မလဲ ငယ်ဘ၀တွေ”
Posted by ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး at 10:47 PM
ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံရတာ ပျော်စရာကြီးနော်.. ကိုယ့်ကို အဲလို ခင်တဲ့သူ ရှိတယ်ဆိုတာ သိရတာလည်း ၀မ်းသာစရာပဲ..
အဲဒီလို သူငယ်ချင်းတွေ အတူ ဆုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးက ပိုလို့ ပျော်ဖို့ ကောင်းမှာနော်။ ဒါဆို... ချစ်သုဝေက သဘောမနော ကောင်းတာပေါ့နော်။ မာန မကြီးဘူး။
ချစ်သုက အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်
သူ ဘယ်လိုပုံဆံလေးပဲနေနေ အရမ်း
လှနေတာပဲ။ ချစ်သု ဘော်ဘော်လည်း
စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဖူးရယ် :) ဒါနဲ့စော
စောစီးစီး ဘာထလုပ်နေတာလဲ? အိပ်
နေပေါ့။ ခြေထောက်က ဘာလို့ ယောင်
ရတာတုန်း။ သိတယ်နော် ချစ်ချစ် မရှိတုန်း
ခုန်ပေါက်ပြီး ဆော့တယ်မှလား? ဒါမှမဟုတ်
ချက်တင်းထိုင်တာ လက်ညောင်းလို့ ခြေထောက်
နဲ့စာရိုက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် အချွဲလွန်ပြီး ခြေဆောင့်
လိုက်တာ သိနေတယ် သိနေတယ်။ ကောင်မလေး
လာညာလို့မရဘူး ဟဟ။ ဆေးလေးဘာလေးလူး
ငြိမ်ငြိမ်နေ မဆော့ရဖူး။ စိတ်ချမယ်နော် :)
ချောမှားပါသွားတယ်
ပြန် _ တယ်နော် :P
ဟားဟား မမဘေဘီကွန်မန့်ဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတာ.. အင်း ပါရမီဖြည့်ဖက်လေးက အဲလို ခုန်ပေါက်ဆော့မယ့်ပုံလေးနော်.. ဟိဟိ